Wax yar ka dib markii la bilaabay ee iPhone 6 iyo iPhone 6 lagu daray, dhowr dib u eegista ayaa marka la barbar dhigo batari iPhone 6 ee la mid ah iPhone 5S. IPhone 6 Plus waxay bixisaa nolosha batari fiican, oo waxay maamushaa in ay ku dhawaad ​​laba saacadood in ka badan iPhone 6 ee batteriga. Laakiin, nasiib daro, labada baytariyo si deg deg ah daadi oo ay jiraan sababo dhowr ah dambeeya.
Qaybta 1. Sababaha iPhone batari ku shubeyso
Daah-of iPhone 6s, 6s iPhone lagu daray, iyo macruufka 9 update hareereysnaayeen murma. Dib u eegista bilowga ah in qaraxa uu ahaa qaar ka mid ah batariga dheecaan ka cayayaanka ee update ah. Arrintan waxaa lagu kala soocaa soo baxay Apple oo ay la update soo socda.
1.Using barnaamijyadooda aad u badan oo ka daadi karaa batteriga
Isla markii iPhone 6 sii daayo, khubarada qaar ayaa tilmaamay in "farriimaha riix" joogto mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee ka dambeeya dheecaan batari ahaa.
Ka sokow waxan oo dhan, telefoonka sidoo kale bilaabo dheecaan ka batari marka aad isticmaalayso Chine gaar ah, Bluetooth feature, kulkulul Wi-Fi, app soo jeeda helid, iyo qaar ka mid ah qaababka kale. Xitaa saamaynta mooshin, animations iyo asalka firfircoon keeni kartaa shubeyso batteriga.
2. Isticmaalka telefoonka ee network LTE meelaha caymiska saboolka yaraynaysaa nolol batari
Khubaro Tech ayaa tilmaamay in iPhone 6 ka bilowdey si deg deg ah wax gubaya ay batteriga mar kasta oo ay u shaqayso on network LTE-xawaaraha sare (4G). Haddii caymiska shabakadda waa miskiin, aad batteriga ka daadi doonaa dhakhso.
Qaybta 2. Sida loo hagaajin iPhone arrinta ku shubeyso batari
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu xallinayo arrintan dheecaan batari iPhone ee. Tallaabada ugu horreysa waa in aad qaadato-si ay u xaliyaan arrinta batari dheecaan la howleheedii telefoonka. Si fudud howleheedii telefoonka kala sooci karaa dhowr arrimood. Dhowr saacadood ka dib, haddii aad ogaadaan in aysan jirin wax horumar ah ee qaab aad telefoonka ee, waxaad isku dayi kartaa fulinaya talaabooyinka soo socda.
Dalka Chine in ay yihiin 1.Find dheecaan ka batari aad telefoonka ee
Macruufka 9 update soo bandhigay feature isticmaalka batteriga. Tani waxay la mid noqon karaan qaar baado nolosha batari telefoonka ee sida ay tuseyso liiska codsiyada in ay aad u badan oo ah awood wax gubaya. Habkaani wuxuu muujinayaa rikoorka barnaamijyadooda Cunidda awooda in ay yihiin firfircoon tan iyo intii toddoba maalmood ee la soo dhaafay.
Tan ugu muhiimsan, muujinta ah ayaa sidoo kale waxa ay muujinaysaa sababta suurto gal ka dambeeya kor u baahan yahay iyo talooyin batari app ee si isku mid ah u xaliyo. Dhammaan wixii aad u baahan tahay inaad samayso waa qabsato ee Chine walaacsan sida iyo batari ku dhow codsiyada gaajaysan haddii loo baahdo.
Si aad u isticmaasho habkaani, guji Settings> General> Isticmaalka> Battery Isticmaalka
2.Turn off tracker taam
App Fitness caashaqi jiray ahaayeen kuwo aad u soo jiitay markii Apple soo bandhigay mooshin ay coprocessor M7 la 5S. Habkaani eegtaa user ee dhaqdhaqaaqa iyo talaabooyinka taam. Habkaani wuxuu u muuqdaa mid cajiib ah, halka jimicsi, laakiin waxaa gubtay, wax badan oo xoog leh batari. Sidaas, waxaa lagu talinayaa in gab habkaani marka aan la isticmaalayn.
Si aad barkinta habkaani, click- siyoodba Settings> siyoodba Motion & Fitness> markaas dami tracker taam ahaanshaha.
3.Check aad iPhone ee network xoog signal
Hubi signal aad network mobile ee. Haddii aad dareento in network telefoonka gacanta waxaa isbedela, waxaa lagu talinayaa in dib aad telefoonka ee goobaha network. Haddii aad telefoonka waa ku LTE ama 3G iyo caymiska ma waa mid cajiib ah, waa in aad xidhaysa hab 4G LTE oo isticmaal telefoonka ee 3G ama network gaabis ah si uu u badbaadiyo iPhone ee batariga ka dheecaan si deg deg ah.
Nasiib darro, haddii signal gacanta ku itaal gurigaaga ama xafiiska deegaanka, waa inaad tixgelisaa inaad wareegaya shabakadaha kale ee bixiya caymis wanaagsan dhow xafiiska gurigaaga iyo.
Si aad u bedesho goobaha LTE, Settings Tubada click gacantu> markaas Slide sahlo LTE si ay u furmaan (dami xogta gacanta)
4.Turn off Bluetooth marka aan la isticmaalayn
Tani waa xilligii ah u iibgeysa, wristbands wireless, iyo Bluetooth isku xira qalabka aad iPhone. Nasiib daro, xogta isugu gudbiyo wirelessly u baahan yahay xaddi badan oo xoog batteriga. Sidaas, waxaa lagu talinayaa in shid Bluetooth oo kaliya marka ay tahay in la isticmaalo, iyo fogaado isticmaalka qalabka dibadda marka heerka batari uu aad u hooseeyo.
Users Apple Watch uma isticmaali karo Doorashadan sida ay watch loo baahan yahay in si joogta ah ku xiran iPhone via Bluetooth.
5.Install macruufka updates waqtiga
Apple hayaa on updates diraya sida ugu dhakhsaha badan ay u aragto wixii arrimo ah, cayayaan, iwm Sidaas hubiyo in aad iPhone waxaa updated on time. Apple ee macruufka 9.0 waa ay update ugu dambeeyey, sii daayay bishii April ee sanadkan.
Ka dhig off update feature auto ee iPhone. Hubi in aad email oo kaliya marka loo baahdo in ay sidaa sameeyaan. Calan aad waqti feature auto-qufulka in hal ama laba daqiiqo. Dami Data feature ka murugeeysan dib aad telefoonka ee, iyo barnaamijyadooda asalka u raaxayn feature u-ada aan loo baahnayn.
Iska ilaali dejinta jeeda firfircoon. Ka dhig goobaha goobta iyo meesha adeegyada marka aan la isticmaalayn. Hubi in aad aad u kulul kaalinta gaarka ah iyo Wi-Fi marka aan la isticmaalayn. Hubi riixdo farriimaha u barnaamijyadooda, iyo demi feature ee Chine in aadan isticmaalin. Haddii aad dareensan tahay in aad telefoon u buuxsamayso jir ahaan diiran, aad markaas waa in isla markiiba reboot aad iPhone.
> Resource > iPhone > muxuu mareenada batari iPhone 6 iyo iPhone 6 lagu daray si degdeg ah? Sidee inaan ku saxno?